Ngizophathwa kanjani uma ngingenwa yi-COVID-19? – Messages for Mothers
Ngizophathwa kanjani uma ngingenwa yi-COVID-19?
Uma kutholakala ukuthi une-COVID-19
Ezinyangeni zokuqala zokukhulelwa uzonakekelwa ekhaya (uqhele kubantu) noma endaweni enabanye abantu abane-COVID-19 noma okungenzeka banayo.
Ngasezinyangeni zokugcina zokukhulelwa (ngemva kwezinyanga ezingu-5) uzonakekelwa ekhaya (uma unezimpawu ezingezimbi kakhulu kodwa hhayi ngesikhathi sokubeletha), endaweni ephephile kanye nabanye abantu abanaleli gciwane, noma esikhungweni sokubeletha.
Uma unezimpawu ezimbi kakhulu njengomkhuhlane noma uphelelwa umoya uzolaliswa esibhedlela esinegumbi lokubeletha lapho kungadingeka ukuba unekekelwe khona endaweni yabagula kakhulu.
Uma usubelethile, kufanele uhlale nengane yakho uyingcelise ube ufake imaski.
Umsebenzi wezempilo ozokunakekela uzogqoka izingubo zokuzivikela futhi akugcine endaweni eqhelile kwezinye iziguli. Ungakhathazeki ngalokhu; kwenzelwa ukuvikela abasebenzi nokuvikela abanye abesifazane ekutholeni i-coronavirus.
← Yini okumelwe ngiyenze uma nginezimpawu ze-COVID-19? → Yini okufanele ngiyenze uma ngingazizwa kahle ngesikhathi ngikhulelwe?